Akụkọ - Ndị na-ere nchara na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ebu amụma na ahịa nchara ga-ebili n'ọdịnihu dị nso
Nationalbọchị Mba mgbe nchara ígwè siri ike, a na-atụ anya ka ahịa nchara na-ebili n'ọdịnihu dị nso.
Dị ka ndị na-ere nchara na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ si kwuo. Ogwe dị ugbu a, eriri igwe na-ekpo ọkụ ọkụ. Oyi na-acha uhie uhie na ọkara - nnukwu efere na ụdị ndị ọzọ akọwapụtara iche.
N'ihe banyere ihe eji a barụ mmanya, n'oge ụbọchị mba, ihe a na-achọ na mpaghara Beijing-Tianjin-Hebei pere mpe, na mgbe ụbọchị mba gachara, ọchịchọ ahụ bidoro ịbawanye. Ntugharị ụbọchị na-eji nwayọọ nwayọọ mụbaa, ọkachasị na 25 mm rebar na-arịwanye elu. Ọktọba 16, ahịa Beijing nke mmepụta ígwè nke Chenggang nke mmachi ọnụ ahịa 25 mm maka 3700 yuan / ton. Tụnyere October 9 elu 40 yuan / ton, ígwè na-ere ahịa na ụlọ ọrụ insiders kwere na, n'ịtụle ugbu a raw mmanụ ụgbọala ahịa na rebar n'ọdịnihu ahịa, mmachi gburugburu ebe obibi na mgbụsị akwụkwọ na oyi tightening ihe, ọ na-atụ anya na n'ozuzu price nke Beijing ewu ígwè ahịa. ke mbubreyo October ga-ebili nwayọọ nwayọọ.
Ngwunye ọkụ na-ekpo ọkụ, nkesa nchara na ndịda na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ achọtara mgbe nyochachara, n'ihi nnukwu ụgbọ ala ugbu a na-arịwanye elu. Ọpụpụ. Mkpofu gwongworo na ihe ndị ọzọ na-ewu ígwè na-achọ ịrị elu, ugbu a na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ere ahịa. Nnukwu ụgbọ ala China ruru nkeji 136,000 na Septemba, ihe ruru pasent 63 n'afọ ọ bụla, data gosiri. Ndekọ si n'aka ndị otu na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ihe ndị na-emepụta China, gosiri na n'ọnwa Septemba, ụlọ ọrụ iri abụọ na ise ahụ metụtara nyocha ahụ rere igwe 26,034 na-egwupụta data, ihe ruru pesenti 64.8 kwa afọ n'afọ. Dabere na amụma a, ọnụahịa ahịa igwe na-ekpo ọkụ na-adịbeghị anya ga-eme ka ọnọdụ ike dị ike.
N'ihe banyere igwe eji ekpuchi oyi, kemgbe Nationalbọchị Mba, mmepụta na ire ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na China. Mgbe ụbọchị mba gasịchara, ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ ala na-enwekarị ihe achọpụtara, nke na-akwalite mmụba nke nchara ígwè. Statistics si na China Association of Automobile Manufacturers na-egosi na ndị njem ụgbọ ala ruru 1.91 nde nkeji na September, na a afọ na-afọ uto nke 7.3%, ịnọgide na-enwe a afọ na-afọ uto nke gburugburu 8% n'ihi na atọ consecutive ọnwa (7.7% kwa afọ na July na 8.9% kwa afọ na August). Omume zuru oke nke ọchịchọ ala dị mma, ọnụahịa nke ngwaahịa akpọrọ akpọrọ na-akwado nke ọma.
Na oké efere, National Day mgbe Beijing, Tianjin na Hebei mpaghara na oké efere ahịa price elu ujo, ọ na-atụ anya na nke a na-emekarị ga-aga n'ihu n'ọdịnihu dị nso.
Ndị na-ere ahịa nchara na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ kwenyere na ahịa nchara ugbu a dị mma, ihe ọjọọ na-emekọrịta. N'akụkụ dị mma, na Septemba, mkpokọta itinye ego na nnukwu ọrụ na mba ahụ mụbara site na 96.6% n'ọnwa na ọnwa, mgbe nchara nchara mba nke ụbọchị rịrị elu, na-akwado ọnụahịa ntụpọ siri ike. Dika ala ozo na-abawanye. Ogologo nchara ahia ka nwere ohere ịrị elu. Site bearish si ele ihe anya, National Day mgbe nchara-achọpụta ngwongwo nso, destocking mgbali na-ebelata; Iwu tighting na mpaghara ala; Nrụpụta ígwè ka dị elu; Mgbe ịbanyechara n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, ihe owuwu na mpaghara ugwu na-eche ihe ndị na-adịghị mma ihu dị ka nkwụsị, nke ga-eweghachite ihe ize ndụ nke ọnụahịa nchara n'oge ikpeazụ.
China Metallurgical News (Mbipụta 7, Mbipụta 07, Ọktoba 20, 2020)